Kuratidza zvinyorwa neelebheri nguva yekupedzisira
Coronavir yakavhara zvikoro zvepuraimari, sekondari uye zvepamusoro
Kubva neChipiri manheru, hurumende yakarambidza mitambo yese, tsika, zvechitendero uye zvehunyanzvi nekutora chikamu kwevanhu vanopfuura zana. Yakavharawo zvikoro zvepuraimari, sekondari uye epamusoro dzidzo. Hazvisati zvanyatsojeka kuti inguva yakadii. Nemusi weChipiri mangwanani, Mutungamiri Andrej Babiš akazivisa nezvazvo pamusangano wevatori venhau mushure memusangano weHurumende Security Council.
"Nekuda kwekushanduka kwechirwere muEurope, isu tasarudza kutora matanho anoshamisa." Kubva musi wa 10 Kurume na18 pm, mitambo yemitambo, yemimhanzi, mafirimu nemitambo, zvechitendero nehunyanzvi zvakaitwa nevanhu vanopfuura zana zvakarambidzwa, "Babiš akadaro pamusangano wenhau.
"Kuvapo kwevadzidzi muzvikoro zvekutanga, sekondari, zvikoro zvebasa remayunivhesiti kunorambidzwa," Babiš akaenderera.
Masayendisiti kutenderera nyika arikutsvaga kurapa kweiyo coronavirus yeCOVID-19. Asi isu tese tinogona kutora chikamu mukugadzirisa dambudziko. Masayendisiti kubva kumayunivhesiti maviri eUSA vanokara pamapuro maviri akamboparidzwa munharaunda kugadzirisa dambudziko re coronavirus ...